Kooriyaa Kaabaa: Kooriyaan kibbaa doonii Chaayinaa K. Kaabaatif boba'aa kennitu qabe jette - BBC News Afaan Oromoo
Kooriyaa Kaabaa: Kooriyaan kibbaa doonii Chaayinaa K. Kaabaatif boba'aa kennitu qabe jette
Goodayyaa suuraa Dooniin ''Lighthouse Winmore'' jedhamtu gara Taayiwaan geessuuf boba'aa feetuus garuu gars hin deemne
Kooriyaan Kibbaa dooniin Chaayinaa qoqqobbii idil-addunyaa cabsuun boba'aa Kooriyaa Kaabaatti yeroo dabarsu qabadhe jette ibsite.
Dooniin ''Lighthouse Winmore' jedhamtu boba'aa toonii 600 doonii Kooriyaa Kaabaatiif dabarsiteetti jedhan qondaaltonni.
Qondaaltonni Kooriyaa Kibbaa kan isaan wanta kana ifa taasisan Donaald Tiraamp Chaayinaa erga himatani ishiinis haaluu ishee hordofeeti.
Dooniin kun buufata Yewosuu Onkololeessa 11 dhaqxee boba'aa calale fudhachuun guyyaa afur booda gara Taayiwaan imalte jechuun tajaajilli oduu 'Yonhap' kan gabaase.
Haa ta'u malee, gara Taayiwaan deemuurra lafa bishaanii daangaa idil-addunyaa irratti doonii Kooriyaa Kaabaatif dabarsite kennite jechuun qondaltoonni natti himan jechuun tajaajilli madda oduu 'Yonhap' gabaaseera.
Gaazexaan 'New York Times' saatalaayitii Ameerikaan suurri ka'u gabaaseera.
Duratti pirezidaantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp gabaasa Chaayinaan boba'aa dooniidhaan gara Kooriyaa Kaabaatti akka darbu eeyyamteetti jedhu arganii ''baay'ee aareera'' jedhan.
Tiwitarii isaanii irrattii obbo Tiraamp Chaayinaan ''harkaafi harkatti qabamte'' jechuun barreessaniiru.
Yoo boba'aan Piyoongiyaangif erguun eeyyamameera ta'e Kooriyaa Kaabaaf ''falli michummaa'' hin jiru jedhan.
Chaayinaan duratti qoqqobbiin Biyyoota Mootummoota Gamtoomani(UN) hin cabne jettee turte.
Chaayinaan torban darbe qoqqobbii Biyyoota Mootummoota Gamtoomani(UN) Ameerikaan qixaa'eefi boba'aa Kooriyaan Kaabaa galchitu keessaa dhibbantaa 90 hir'isu deeggartee turte.
Qoqqoobbiin dhiyeenyaa yaalii misaa'ela baalistikii Piyoongiyaang dhaabsisuuf kan xiyyeeffatedha.
Tiraamp Chaayinaa kan qeeqan erga gaazexaan Kooriyaa Kibbaa 'Chosun Ilbo' jedhamu taankaroonni Chaayinaa galaana jalaan boba'aa Kooriyaa Kibbaaf dabarsu jedhee erga gabaasee booda.
Qondaaltota olaanoo Kooriyaa Kibbaa eeruun gaazexichi akka gabaasetti yeroo seeraan ala doonii tokkorraa kaanitti boba'aan yeroo dabarfamu saatalaayitiiwwan basaasaa Ameerikaan erga baatii Onkololessaa si'a soddoma waraabameera.
Qondaaltonni Ameerikaa gabaasicha hin mirkaneessine. Haa ta'u malee, qondaallii ministira dhimma alaa Ameerikaa tokko Rooytarsiif akka dubbatanitti wanti akkanaa ammas ta'aa jiraachuu danda'a jedhaniiru.
Chaayinaan biyya gama daldalaan michuummaa waliin qabdu Kooriyaa Kaabaa irratti irra deddeebbiin qoqqoobbii Biyyoota Mootummoota Gamtoomani(UN) akka raawwattu himtee turte.
Goodayyaa suuraa Kooriyaan Kaabaa dhiibbaan idila-addunyaa irraa irra gahaa jiruus mataa gadi qabuu hin feene
Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbii himaan ministeera raayyaa ittisaa Chaayinaa Ren Guwokiyaang ripportarootaaf akka himanitti : ''Waan hin jirre haasa'aa jirtu.''
Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Mikaa'el Leevi biyyoonni hundi waltti dhufeenya Kooriyaa Kaabaa waliin qaban akka dhaaban waamicha dhiyeessaniiru.
Gama kaaniin, Kamisa har'aa manni maree nageenyaa Biyyoota Mootummoota Gamtoomani(UN) dooniiwwan Kooriyaa Kaabaa afur waan dhorkame fe'aniiru jedhamani shakkaman tajaajila buufata doonii idila-addunyaa akka hin arganne dhorkeera jechuun AFP'n gabaaseera.
Kunis lakkoofsa dooniiwwan Kooriyaa Kaabaa Biyyoota Mootummoota Gamtoomani(UN)'n dhowwaman saddeetin gaheera.
Yeroo ammaa Ameerikaa, Biyyoota Mootummoota Gamtoomani(UN) akkasumas Gamtaan Awurooppaa Kooriyaa Kaabaa irrattii qoqqoobbii kaa'aniiru.
Kooriyaan Kaabaa misaa'ela 'seenaa keessatti guddicha ta'e' dhukaaste
'Hattoonni Kooriyaa Kaabaa karoora waraanaa US - Kooriyaa Kibbaa cabsan
Chaayinaan kubbaaniyyoota Kooriyaa Kaabaa cufuufi
WannaCry Miidhaa saayibarii: Ameerikaan WaannaaKraay'f Kooriyaa Kaabaa komatte